GASIFICATORS KLIMOVA "ECO-FARMER" - ROBOTS MALAGASY MISAOTRA MISY
Ny fitaovana fanodinana ny Biraon'ny Design Klimov mba hamongorana ny fako dia novolavolaina tamin'ny fotodrafitrasa pyrolysis an'ny andian-tsambo FERMER, aseho amin'ny andalana fametrahana
Ny endri-tsoratra nomen'ny fametrahana "ECO-FARMER" arakaraka ny habeny natsangan'ny tobim-pamokarana fototra
Ireo endri-javatra ara-tontolo iainan'ny entona "ECO-FARMER". Chlorine removal
Ny fisian'ny process-in-processor chloride hydrogen converter. Amin'izao fotoana izao, ny fametrahana ny orinasam-pampandrosoana isan-karazany amin'ny fanodinana ny fako dia tsy manana fitaovana hanesorana ny fananganana siramamy amin'ny solika. Vao haingana dia lasa loharanom-pahavoazana ho an'ny HCL ny fatran'ny fako fanangonam-bokatra ao an-trano. Ny karazam-pako voajanahary natao tamin'ny fampiasana chlor dia: tavoahangy PET, sakafo tsy mahazatra, ravina varavarankely, fitahirizana ra sy taova anatiny, katerina, tavoahangin-tsakafo, fitaovana fanamafisam-peo, fehiloha fandidiana sy masinina, kodiarana fandidiana, . Androany any Eoropa Andrefana, ny fiara vaovao dia misy 16 kg PVC. Ny PVC dia ampiasaina betsaka amin'ny famokarana kilalao ankizy. Lisitra (lavitra tsy feno) ny kilalao vita amin'ny PVC: saribakoly, ducklings ho an'ny trano fandroana, kilalao mirefodrefotra, sahona, baolina, sns. Amin'ny ankapobeny, azo lazaina fa ampiasaina amin'ny famokarana ny "kilalaon" rehetra ny PVC. Maro ny entona entona vita amin'ny PVC. Ohatra, ny fitaovana (PVC sarotra ampiasaina amin'izany), ny fonosana (PVC), ny kiraro, ny carte de crédit sy ny telefaona, fitaovana ara-panatanjahan-tena sy fitaovana (baolina, fitaovana), akanjo, kitapo, kitapo, sns.
Ny fisian'ny chlor ao amin'ny gaza fitrandrahana tsy amboamboarina, na dia ao anatin'ny tsy fahampian-tsakafo ambany aza, dia mety ho mahafaty ny mpiasan'ny fitaovana. Ny fiasan'ny mpampiofana kloro natsangana dia voafehin'ny solosaina kôlôra napetraka ao amin'ny toeram-piasana amin'ny orinasa ECO-FARMER. Ireo mpitsabo hôlôra dia mandrefy ny votoatin'ny gazy amin'ny rivotra ary manamarika ny fivoahany. Rehefa mandray ny mari-pankasitrahan'ny klôro ny ECO-FARMER, dia hampiato ny fizotran'ny fako ny automatique ECO-FARMER ary hamongorana ny vokatra manjo amin'ny fotoana mety.
Ireo endri-javatra ara-tontolo iainan'ny entona "ECO-FARMER". Dioxin sy furan fanesorana
Ny dioxine dia anisan'ny vondron'ny organochlorine, araka ny filazan'ilay anarana, ireo zavatra ireo dia azo avy amin'ny vongan-dranomamy sy ny zavamaniry organika. Ny Chlorine dia tena misy poizina (nosoratako momba izany etsy ambony), na dia hita ao amin'ny mpitsabo manadio sy ny maro aza. Saingy rehefa miditra amin'ny zava-manahirana izy, dia lasa zavatra mampidi-doza kokoa izany. Ny dioxine poison mahafaty dia avo lenta mihoatra ny 3000 raha oharina amin'ny chlorine!
Ny vondrona "ECO-FERMER" dia misy fitaovana fanala-basy. Amin'ny voalohany, ny setroka rehetra ateraky ny valan-tsofoka dia mamakivaky ny fiparitahan'ny bakteria (rafitra fanafody). Ny hafanana tantera dia miovaova amin'ny +1000 ka hatramin'ny +2000 degrees, ny fanamafisana toy izany dia mitarika tanteraka amin'ny famotehana ireo akora misy poizina ao anaty atoma sy molekiola. Ao anatin'io toe-javatra io, dia mitoetra ho 0,1 segondra ny entona mandatsa-dranomaso, avy eo ny hafanana mandritra ny 0,3 segondra dia mianjera amin'ny +100 degre. Noho ny tahan'ny hafanana faratampony, ny furans sy ny dioxine dia tsy manam-potoana hamerenana indray amin'ny atoma sy molekiola. Raha ny fijerin'izy ireo indray dia mitaky 1 segondra ny fotoana ary ny mari-pana amin'ny telolafy telon'ny +400. Ny fomba fiasa ara-teknôlônika momba ny dioxine sy ny fandringanana ny grenady ao amin'ny fametrahana ECO-FARMER dia mitarika ho amin'ny fandringanana tanteraka azy ireo
Amin'izao fotoana izao, amin'ny fampiharana, tsy misy orinasa famokarana hafanana sy fitrandrahana fitrandrahana ala dia misy fitaovana fandoroana plastika miaraka amin'ny fanala vetivety.
Ny fampiasana plasma ao amin'ny dingan'ny fanitsakitsahana ny fivoahan'ny gazy
Ny teknolojia Plasma, novolavolaina maherin'ny 40 taona lasa izay, dia dingana lehibe ho an'ny fampivoarana ny fitaovam-baovaon-javatra Ny fandraisana anjaran'ireo minisitra. Ny fitaovana fikolokoloana dia fitaovana ara-teknika mahomby ny fahafahana manova tanteraka ny mari-paha-plasma arakaraky ny toetry ny mason-tsakafo sy ny toetry ny ilana azy passante
Ny fitsipika momba ny fandidiana ny ankamaroan'ny plasmatrônes amin'ny hery avy amin'ny kW hatramin'ny megaawatts dia mazàna iray ihany. Kitapo elektrika eo anelanelan'ny kôdôda, vita amin'ny fitaovana henjana, ary ny fantsom-pahamendrehana mafana. Arc. Hatramin'ny elanelan'ny herinaratra dia manana mari-pahaizana be loatra, tonga amin'ny ambaratonga an-jatony, rehefa Ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny doro ala dia ny fiakaran'ny hafanana. Amin'ny alàlan'ity birik'Ankandrefana ity, Ny entona mandatsa-dranomasin'ny plasma izay manaloka rivotra, na vovo-drano, na azo ampiasana bebe kokoa. Ny gazy mandevona dia ionisialy, ary vokatr'izany, ny vokatra dia ny toetoetran'ny angatra fahefatra, antsoina ranon-dra. Ao anatin'ireo fitaovana matanjaka am-patana eo amin'ny paosy dia misy bobongo emagneta napetraka, izy io dia manatsara ny fiparitahan'ny plana eo amin'ny axes ary anodina fitaratra
Plasma loh. Ny fahaiza-manao amin'ny fampiasana plasma amin'ny hafanana dia 10-100 avo lenta kokoa noho ny afo mirehitra mivantana. Amin'ny zavaboary, ny plasma dia asehon'ny tselatra mandritra ny oram-baratra.
Androany, ny fitaovam-pyrolysis sy ny fanodinana rehetra ao Rosia ary ampiasaina amin'ny fanodinana ny fako dia tsy manana fiarovana ny tontolo iainana, fa manana mari-pahaizana momba ny fiarovana ny tontolo iainana sy fahazoan-dàlana hampiasaina amin'ny Ministera misahana ny tontolo iainana Rosiana ho an'ny fanodinana. Mety ampy ve ny hamoaka ny fahafatesana? Ny fahasalaman'ny olom-pirenentsika dia nodoran'ny fako